“G6” ရဲ့ Brand နာမည်ကို “G6 ThinQ” အဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ LG! – AsiaApps
“G6” ရဲ့ Brand နာမည်ကို “G6 ThinQ” အဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ LG!
May 18, 2018 May 18, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on “G6” ရဲ့ Brand နာမည်ကို “G6 ThinQ” အဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ LG!
LG ဟာ ၂၀၁၇ ဖေဖော်ဝါရီလတုန်းကစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ G6 ကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်က G6 ThinQ အဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဘာတွေပြောင်းလဲသွားလဲဆိုတော့ ThinQ ပါတာနဲ့ မပါတာပေါ့ဗျာ (စတာပါ ?)
ThinQ ဆိုတာကတော့ LG ရဲ့ကိုယ်ပိုင် AI platform တစ်ခုဖြစ်ပြီး ThinQ အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့ Device တွေကို LG ဟာ OTA update အသစ်ပြုလုပ်ပေးမှာပဲဖြစ်တယ်။ အခုလိုပြောင်းလဲမှုဟာပြီးခဲ့တဲ့လတုန်းက LG V30 ကို V30 ThinQ အဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့အတူတူပါပဲ။ (V30 ThinQ နဲ့ V30S ThinQ က မော်ဒယ်မတူပါဘူးနော်..)။
V30 ဟာ ThinQ အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ OTA update တစ်ခုရရှိပြီး AI camera feature တွေပါဝင်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထိုနည်းတူ လက်ရှိမှာလည်း ThinQ ပါဝင်လာတဲ့ G6 ဟာလည်း နာမည်ပြောင်းလဲသွားတဲ့ OTA update တစ်ခုရရှိမှာဖြစ်သလို AI camera feature တွေလည်းပါဝင်လာဉီးမှာပါ။ AI Cam ကတော့ ကင်မရာရိုက်ကူးတဲ့အခါ အရာဝတ္ထုတွေ၊ အလင်းအမှောင်အခြေအနေတွေ အပေါ်မှုတည်ပြီး Setting ချိန်နိုင်ဖို့ Suggest လုပ်ပေးတဲ့ Feature တစ်ခုပါ။
AI Cam အပြင် AI နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တခြား Feature တွေကရော G6 ThinQ မှာဘယ်လိုတွေပါဝင်လာမှာလဲဆိုတာသိရှိဖို့အတွက် အချိန်အနည်းငယ်ပေးပြီး စောင့်ကြည့်ရဉီးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Instagram ပေါ်မှာ အချိန်ဘယ်လောက် သုံးမိလဲ ဆိုတာသိနိုင်တော့မယ်
Apple ကို စောင်းမြောင်းထားတဲ့ Samsung ကြော်ငြာအသစ်